OpTop Bitcoin Cloud Mining Sites na Eprel 2021 - Achọghị Pros & Cons.
Ebe Ngwuputa Igwe Igwe ojii? Ntuziaka 2021 anyị na-eduga na saịtị kacha mma igwe ojii
Bitcoin igwe ojii Ngwuputa Platform
SHAMINING na-arụ ọrụ n'igwe ojii na -emepụta ihe mgbe ọ na-eji teknụzụ eme ihe, nke ndị ọkachamara IT na mpaghara cryptocurrencies mepụtara. Echiche ngwaahịa bụ isi bụ ezigbo disparate computing resources ngwa. Anyị na-ejikọ ndị na-etinye ego ọnụ, gụnyere ndị bịara ọhụrụ, na otu ikpo okwu ọnụ. Ntụkwasị obi nke ndị ahịa anyị bụ ihe akaebe doro anya: ha na-eji obi ha niile enweta ego ha kwa ụbọchị. Echiche ngwaahịa bụ isi bụ ezigbo disparate computing resources ngwa. Anyị na-ejikọ ndị na-etinye ego ọnụ, gụnyere ndị bịara ọhụrụ, na otu ikpo okwu ọnụ. Ndị ahịa anyị tụkwasịrị obi dabere n'ihe àmà doro anya: ha na-akwụwa aka ọtọ na-akpata ego ha kwa ụbọchị.
Tinye ego na ntanetị site na ebe ọ bụla
Wepụ ego gị na nchekwa na ozugbo
Jikwaa ndị na-egwuputa ihe na ngwaọrụ ọ bụla, ma ọ bụ desktọọpụ ma ọ bụ ekwentị mkpanaaka
Gaa na shamining
Oge igwe ojii Bitcoin na-egwuputa egwu N'oge na-abụghị nke gara aga, ị nwere ike iji narị narị dollar ole na ole na ngwaike ọkachamara ma nwee ọfụma nke uru cryptocurrencies. Agbanyeghị, na ụlọ ọrụ ugbu a karịrị akarị, ọ gaghị ekwe omume ịlele anya.
Nke a bụ n'ihi na ọnụ ọgụgụ ndị na - egwu egwu - nke ọtụtụ n'ime ha na - achịkwa China. Na na-ekwu, ị ka na-eguzo a ohere nke na-eme na-aga n'ihu uru site Ngwuputa site na-ekere òkè gị ego na ndị ọzọ na investors.
A maara dị ka 'igwe ojii na-egwupụta akụ', ọ nweghị ihe achọrọ iji zụta akụrụngwa ọ bụla ma ọ bụ nye ọkụ eletrik. Kama nke ahụ, ị ​​zụrụ 'hashing power', ị ga-enwetakwa òkè nke uru - dabere na itinye ego gị.
Ọ bụrụ n ’ịchọrọ inyocha ma nke a ọ bụ ihe na - ezute ebumnuche itinye ego gị ogologo oge - gbaa mbọ gụọ nke anyị Ntuziaka 2021 n'efu na saịtị kacha mma igwe ojii.
Mara: Ngwuputa igwe ojii bụ mpaghara na-achịkwaghị achịkwa, yabụ enwere ikpo ikuku site na nyiwe na enweghị ebumnuche ndị ọzọ na-abụghị izuru ego gị. Dị ka ndị dị otú a, jiri nlezianya kpachara anya tupu ịbanye.
Kedu ihe bụ igwe ojii?
Ngwuputa igwe ojii bu usoro nke ichoputa cryptocurrencies dika Bitcoin na Ethereum na-enweghị mkpa ịzụta ngwaike ọ bụla. Dị ka ọ dị, akụrụngwa achọrọ iji kpụọ cryptocurrencies na DIY nwere ike iri puku kwuru puku. Ọzọkwa, site na ihe mgbochi na-akpata nsogbu na-eme ka nsogbu ya sie ike karịa oge, ngwa ngwa ngwaike a zụrụ n'oge na-adịghị anya ga-eji ngwaọrụ ndị ọzọ dị ike dochie anya ya - na-emezi ego gị.
Ikwesiri ịkọwapụta ọnụ ahịa nke ịrụ ọrụ akụrụngwa gị, ọ bụghị nke kachasị n'ihi na a ga-achọ ka ị rụọ ọrụ elekere 24 kwa ụbọchị iji wee nwee ohere ị nweta uru. Dị ka ndị dị otú ahụ, ngwaọrụ ndị dị ike na-achọ ihe ọkụ eletrik na-arụ ọrụ rụrụ arụ, nke bụ ụgwọ ọzọ ga-eri n'ime ROI gị ogologo oge. Nke a bụ ebe igwe ojii igwe ojii na-egwuputa igwe na-abanye.
N'ime ụdị ya kachasị elu, igwe ojii igwe ojii Bitcoin na-enye gị ohere ịnweta oghere mkpuchi cryptocurrency site na nkasi obi nke ụlọ gị - na-enweghị mkpa ịzụta ngwaike ọ bụla ma ọ bụ rie ọkụ eletrik ọ bụla. Kama nke ahụ, ị ​​ga-etinye ego n'ime ọrụ ịmịpụta akụnụba nke nwere usoro achọrọ iji ghaa nke ọma.
N'ime ime nke a, ị ga - enweta oke nke uru ngwuputa ala - dabere na ego ị tinyere. Nke a na - enye gị ohere ịhụ nloghachi na ntinye ego gị site na otu ụbọchị, dị ka igwe ojii igwe ojii na -emepụta ego kwa ụbọchị. Then ga-enwezi ohere itinyeghachi uru gị, nke pụtara na ị ga-erite uru site na mkpụrụ nke uru onyinye.
Agbanyeghị, ọ dị mkpa ikwusi ike na oghere igwe ojii Bitcoin na-arụkarị ọrụ dị ka Wild West. Ọ bụ ezie na e nwere ọtụtụ ihe ntanetị nwere ike ịkwenye na ya - ọtụtụ adịghị. N'ezie, enweela ọtụtụ igwe ojii na-egwupụta igwe ojii nke na-apụ n'anya n'abalị - na-ewere ego itinye ego na ha n'ụzọ. Dị ka ndị dị otú a, ịkwesịrị iji nlezianya kpachara anya.
Kedu ihe bụ uru na ọghọm nke igwe ojii?
M cryptocurrencies na-enweghị mkpa ọ bụla ngwaike
Enweghị iwu iji rie ọkụ eletrik
Tinye ego dị ka obere ma ọ bụ dị ka ịchọrọ
Hụ nkwụghachi na ntinye ego gị site na ụbọchị mbụ
Họrọ cryptocurrency ị chọrọ iji igwe ojii gwu m
Nata òkè nke uru Ngwuputa dabere na ntinye ego gị
Ọtụtụ ihe ntanetị igwe ojii na-egwupụta saịtị
Enwere ike irite uru dị oke ala
Kedu ka igwe ojii si arụ ọrụ igwe ojii?
Tupu isonyere igwe ojii na-egwupụta ikpo okwu maka oge mbụ, ọ dị oke mkpa na ị ghọtara nke ọma etu usoro a si arụ ọrụ. Dị ka ndị dị otú a, anyị ga-atụ aro ịtụle usoro ndị a usoro ntụpụ ụkwụ.
Mara: N’ụmụ amaala igwe ojii anyị na-egwupụta n’ebe a, anyị na-eji ọnụọgụ dị mfe na ngụkọta oge. Nke a bụ iji hụ na ị ghọtara usoro ya dum.
Nzọụkwụ 1: Họrọ Mingwé ojii Mining Saịtị
Firstgbọ mmiri mbụ ị ga - akpọ ga - ahọrọ saịtị igwe ojii igwe ojii nke na-egbo mkpa gị. Zọ kachasị mma iji mee nke a bụ ịme nyocha dị mma n'elu ikpo okwu - dịka oge ole saịtị ahụ nọ na-arụ ọrụ yana nyocha dị ka ọhaneze.
Anyị egosiputala ụfọdụ ndụmọdụ banyere ihe ịchọrọ ile anya na Bitcoin. ojii ojii Ngwuputa saịtị n'ihu ala anyị ndu. N'aka nke ọzọ, anyị na-edekọkwa nhọrọ anyị kachasị elu maka saịtị kacha mma igwe ojii igwe ojii nke 2021 ruo na njedebe nke ibe a.
🥇 Kwụpụ 2: Mepee Akaụntụ na Ego Ego
Ozugbo ị họpụtara igwe ojii ị ga-eji na-egwupụta ihe ị ga - achọ iji, ị ga - emepe akaụntụ. N'ọtụtụ oge, ị ga-achọ ịnye adreesị ozi-e ma họrọ aha njirimara na paswọọdụ. Nke a bụ n'ihi na igwe ojii na-egwupụta saịtị enweghị mmekọrịta na ego fiat - yabụ achọrọ ka ha jụọ gị ozi gbasara onwe gị ma ọ bụ ego.
Then ga-ahụ mkpa itinye ego, yana igwe ojii ebe a na-egwupụta akụ na saịtị na-akwado ọtụtụ cryptocurrencies ịhọrọ site na. Usoro a na-arụ ọrụ otu ụzọ ahụ dị ka mgbanwe mgbanwe nke atọ nke atọ, ọ bụrụhaala na ị ga-ebufe ego site na obere akpa gị.
Ga - achọ:
Pịa na cryptocurrency ịchọrọ itinye na saịtị igwe ojii
Detuo adreesị akpa ego pụrụ iche na mkpokọta gị
Gaba na nke gị onwe obere akpa na mado na adreesị
Tinye ego ịchọrọ ịkwụnye ma nyefee ego ahụ
Gị ígwé ojii na Ngwuputa saịtị a ga-otoro n'ime 10-20 nkeji
3kwụ na XNUMXkwụ XNUMX: Họrọ a Cryptocurrency ka m
Ozugbo ịhọrọ igwe ojii igwe ojii ị ga-achọ iji, ị ga-enwe ike itinye ego gị. Cloudgwé ojii na-egwupụta akụ na saịtị na-enyekarị gị nhọrọ nke igwu ọtụtụ ọnụọgụ cryptocurrencies dị iche iche, nke ọ bụla ga-abịa na uru na ọghọm ya.
Dịka ọmụmaatụ, ka ị na-egwupụta Bitcoin na-enye nkwụsi ike karịa cryptocurrencies ndị ọzọ n'ahịa, igwupụta obere ego nwere ike inye nnukwu ikike.
Mara: Enwere ọtụtụ ihe ị kwesịrị ịtụle tupu ịhọpụta nke cryptocurrency m - dị ka obere hashrate, oke nkwekọrịta ahụ, yana mkpụrụ ebuputara. Anyị na-ekpuchi nke a na nkọwa zuru ezu mgbe e mesịrị.
Ozugbo ịchọtara ego ịchọrọ iji igwe ojii rụọ, ị ga-ekpebi ego ịchọrọ itinye ego. Ozugbo imere, ị ga - enweta ego ewere na njikwa akaụntụ gị na usoro itinye ego na ya.
Nzọụkwụ 4: Nweta oke gị ruo mgbe nkwekọrịta gị
N’ọtụtụ ikpe, a ga-achọ ka itinye ego maka oge pere mpe. Amara dị ka 'Oge nkwekọrịta', nke a na - akọwa ogologo oge ị ga - achọ itinye ego gị na mbụ. Nke a na-arụ ọrụ n'ụdị yiri nke agbụ, ma ọ bụrụhaala na ị ga-enweta nkwụnye ego ọmụrụ nwa gị n'oge oge niile, yana ego nkwụnye ego mbụ gị na ụbọchị nkwekọrịta ntozu okè.
O sina dị, ọtụtụ igwe ojii na-egwupụta saịtị ga-ekesa òkè gị nke uru Ngwuputa kwa ụbọchị. Nke a ga - eme kwa ụbọchị rue mgbe nkwekọrịta ahụ ga - eto. Mgbe o mere, ị ga-enweta ego isi zuru ezu zuru ezu.
Invest na-etinye 1 BTC n'ime nkwekọrịta igwe ojii Bitcoin na-egwupụta akụ
Nkwekọrịta ahụ bụ otu afọ
Igwe ojii na-egwupụta igwe ojii na-akwụ ụgwọ 0.0001 BTC kwa ụbọchị
Receive na-enweta 0.0001 BTC kwa ụbọchị maka otu afọ
Ozugbo otu afọ gwụsịrị, ị ga-enweta 1 BTC azụ gị
Ọ bụrụ na enwere ike, ọ ga-adị mma ma ị tinye ego ị na-akwụ kwa ụbọchị na ego ọzọ. Nke a ga - enyere gị aka ịnụ ụtọ mmetụta nke ọmụrụ nwa, nke pụtara na ị ga - enweta 'mmasị na ọmụrụ nwa' ma si otú a - bulie ego gị ngwa ngwa.
Họrọ Kedu Cryptocurrency ka M
Yabụ ugbu a ị matara etu igwe ojii na -emepụta igwe ojii si arụ ọrụ, ị ga-echezi maka ego kristal ịchọrọ ịkọ. Nke a anaghị adị mfe, ebe ọ bụ na enweghị azịza ọ bụla ga - aba n ’mkpụrụ ego kachasị mma nke m. Kama nke ahụ, enwere ọtụtụ mgbanwe ndị ị kwesịrị ịtụle.
Mkpụrụ ego dị mkpirikpi
Nke mbu, ikwesiri ileba anya etu mkpuchi okwu a na-ekwu na-arụ na ahịa ahịa. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na mkpụrụ ego ahụ anọla na trajector elu ruo ọtụtụ izu ma ọ bụ ọnwa, mgbe ahụ ọ ga-aba uru ịwụli.
N'ihi gịnị? Ga-enweta uru igwe ojii gị kwa ụbọchị, nke a ga-akwụ ụgwọ na cryptocurrency ị na-egwupụta. Dị ka ndị dị otú a, ọnụ ahịa nke mkpụrụ ego ahụ ga-enwe mmetụta na ROI gị n'ozuzu, ọkachasị ma ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ ire mkpụrụ ego gị ozugbo akwụchara ha ụgwọ.
Ogologo Ogologo Mkpụrụ ego
Ọ bụrụ na ị nwere mmasị karịa na ogologo oge ikike nke itinye ego gị, ị ga - akachasị mma ịhọrọ cryptocurrency ị chere na ọ bụ ezigbo ohere ịbawanye uru n'ọdịnihu. N'ime ime nke a, ị ga-ejidesi uru urukpuru nke igwe ojii gị n'uche maka ire mkpụrụ ego ahụ n'ọtụtụ afọ.
N'ikpeazụ, ọ bụrụ na ị nwere ntụkwasị obi na ikike nke cryptocurrency ahọpụtara, ị ga-enwe ohere ịnweta mkpụrụ ego na ego efu site na igwe ojii.
N'ime afọ ole na ole mbụ nke Bitcoin, ọ ga-ekwe omume imeri ụgwọ ọrụ nsị na ngwaọrụ CPU dị mkpa. Nke a bụ n'ihi na ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ asọmpi n'etiti ndị na-egwuputa akụ, nke pụtara na onye ọ bụla nwere ezi ohere iji merie ụgwọ ọrụ ahụ dị oke mkpa. Otú ọ dị, dị ka Bitcoin dị ugbu a ọtụtụ ijeri akụ klas, ohere ndị na-achịkwa ebe a na-egwupụta akụ na-achịkwa nke ọma.
Ka o siri dị, ọ nwere ike ịba uru ịhọrọ cryptocurrency nke na-arụ ọrụ na obere asọmpi igwu ala. Dị ka a pụrụ isi kwuo ya, obere mkpụrụ ego dị iche iche dị oke mkpa, ohere ka ọrụ igwe ojii gị ga-enwe mgbe niile na-emeri ngọngọ ngọngọ.
Eld Eburu Amuma
Imirikiti ebe nrụọrụ igwe ojii na-egwupụta igwe ga-enye gị mmebi nke ụgwọ a tụrụ atụ na cryptocurrency ị họọrọ. A na-egosipụta nke a oge ụfọdụ dị ka ego dollar maka KW / s ma ọ bụ MH / s. Agbanyeghị, nke a na - eme ka o sie ike ịmata nke ọma ego ole ị ga - enweta, yabụ anyị na - ahọrọ saịtị na - enye mkpụrụ ego atụpụtara na pacenti.
Rịba ama, ọ nweghị nkwa ọ bụla na ị ga-amata mkpụrụ a tụrụ atụ nke saịtị igwe ojii na-ebipụta, ebe ọnọdụ ahịa na-agbanwe kwa ụbọchị.
Kedụ ka m ga - esi họrọ saịtị n’igwe ojii?
Họrọ usoro ikpo okwu ị ga-eji mee ihe n'ọchịchọ gị inweta uru nke igwe ojii bụ akụkụ kachasị ike nke usoro ahụ. Nke a bụ n'ihi na ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ na-achịkwaghị achịkwa, yabụ na ego gị enweghị 100% nchekwa.
O sina dị, anyị edepụtara ụfọdụ isi ihe ị ga - achọ ịchọ tupu ịbanye na saịtị igwe ojii ọhụụ.
Mara: Ọ bụrụ na ịnweghị oge achọrọ iji mee nyocha nke gị, anyị edepụtarala igwe ojii igwe ojii ka anyị na-aga n'ihu.
Aha na aha ndekọ
Agbanyeghị na anaghị achịkwa usoro ikuku igwe ojii, ị ka nwere ọtụtụ ozi ị ga-enweta na ngalaba ọha. Firstly, lelee iji hụ mgbe igwe ojii na-egwupụta saịtị na oru. Ogologo oge ọ rụworo ọrụ - nke ka mma.
Mgbe ahụ ị kwesịrị inyocha weebụsaịtị dị ka Reddit iji chọpụta echiche ọha mmadụ banyere onye na-eweta igwe ojii igwe ojii. Ọ bụrụ na enwere mkpesa na-agbanwe agbanwe site n'aka ndị na-etinye ego na saịtị ahụ, ị ​​kwesịrị ị zere ya.
Co Ego ndị akwadoro
Ikwesiri ịtụle ụdị cryptocurrency ịchọrọ iji kwado igwe ojii na-egwupụta akaụntụ gị. Ọ bụrụ na ikpo okwu anaghị akwado mkpụrụ ego ị na-ejide ugbu a, nke a pụtara na ị ga-aga zụta ya.
O yikarịrị ka nke a ọ ga-eme ka ego itinye ego gị tinyekwuo ego mgbe ị gbanwere ụgwọ mgbanwe, yabụ chọpụta ụdị mkpụrụ ego na-akwado tupu ịmepe akaụntụ.
Equipment Ngwá Ọrụ Ngwá Ọrụ
A na-achọ nyiwe igwe ojii iji nweta usoro ị ga - eji rụọ ọrụ nke ga - enwe ike ị nweta nkwanye ụgwọ. Ọ bụrụ na ọ bụghị, ị gaghị enwe ohere ịme ego ọ bụla. Ihe mbu banyere nke a bu ngwaike ngwaike nke ikpo okwu nwere.
Dịka anyị siri kwuo na mbụ, a na-achọkarị ndị na-egwuputa ihe ka ha kwalite ngwaọrụ ngwaike oge niile na mgbe nsogbu nsogbu nsogbu blockchain na-abawanye. Dị ka ndị dị otú a, nyochaa ntọala nke ebe a na-egwupụta igwe ojii na ajụjụ na nke dị oke mkpa - ihe ngwaike ọ nwere.
Ọnọdụ nke igwe ojii na-egwupụta igwe ojii kwesịrị ịrụ ọrụ dị mkpa na usoro mkpebi gị. Dịka ọmụmaatụ, ị ga-ahọrọ ịhọrọ ọrụ ntinye nke sitere na mba nwere ọnụ ahịa ume ala. Nke a bụ iji hụ na erighị mkpụrụ gị site na ọkụ eletrik na-eto eto mgbe niile.
N'otu aka ahụ, ị ​​ga-ahọrọ ebe igwe ojii na-egwupụta igwe ojii nke dabeere na ebe a na-eme enyi na enyi. Ọ bụrụ na ọ bụghị, enwere ohere ọ bụla na ndị ọrụ obodo mechiri ọrụ ahụ.
🥇 Obere nkwekọrịta
Ọ dị mkpa iji nyochaa nkwekọrịta kacha nta nke itinye ego gị na ya. Ọmụmaatụ, ma ọ bụrụ na ígwé ojii na Ngwuputa saịtị na-achọ niile investors itinye aka a otu afọ nkwekọrịta, nke a pụtara na gị isi ego agaghị akwụghachi azụ ruo mgbe afọ kwubiri. Nke a nwere ike ịbụ nsogbu ma ọ bụrụ na ịnwee nsogbu nsogbu ego na-adị obere ma chọọ ịchụ ego gị.
Companieslọ ọrụ ndị na-egwupụta igwe ojii na-arụ ọrụ ego. Dika odi otua, ikwesiri ighota ihe kpatara ego ego a. Oge ụfọdụ, enwere ike ịgba gị ụgwọ na-agbanwe agbanwe dabere na oke ọkụ eletrik a na-ere. N'ọnọdụ ndị ọzọ, ebe a na-egwupụta igwe ojii nwere ike iwe pasent nke ego ị nwetara na uru. Dịka ọmụmaatụ, ikpo okwu nwere ike were 10% nke ụgwọ 0.0001 BTC nke Ngwuputa gị.
Ọzọkwa, ịkwesịrị inyocha ma igwe ojii igwe ojii a na-egwupụta ma na-eketa ụgwọ ọrụ ngọngọ ahụ na igbochi ụgwọ azụmahịa, ma ọ bụ naanị ụgwọ ọrụ. N'ọtụtụ ọnọdụ, nyiwe ga-edebe ụgwọ azụmahịa nke ha nakọtara mgbe ha meriri ụgwọ ngọngọ, nke pụtara na ị na-efu na mkpụrụ ọzọ.
Ihe egwu di na iji igwe ojii
Dị ka ọ dị na ngwaahịa ngwaahịa ọ bụla, ịkwesịrị inwe nghọta siri ike banyere ihe egwu dị na ya. Emechakwa, cryptocurrencies na-arụ ọrụ na ụlọ ọrụ na-eche echiche nke ọma, yabụ enwere ohere ọ bụla ị nwere ike idafu ego.
⚡ Scam Cloud Mining saịtị
Ọ bụ ezie na igwe ojii igwe ojii ka bụ ihe ọhụrụ ọhụụ, enwere ọtụtụ ihe atụ nke ebe nrụọrụ weebụ ojoro nke jiri ego ndị ahịa gbapụ.
Ọ bụ ezie na ikpo okwu nwere ike ibido rụọ ọrụ n'ụzọ ziri ezi, anyị ahụla ikpe ebe igwe ojii na-ekpochapụ igwe ojii n'abali, na-atụfu ndị na-etinye ego ha.
Na ngwụcha, enweghị nkwa na nke a agaghị eme gị, ọbụlagodi n'ihi ọdịdị na-enweghị usoro na enweghị oke nke cryptocurrencies.
Will ga na-egwuputa cryptocurrencies, yabụ uru gị ga-akwụ na cryptocurrencies. Dị ka ndị dị otú a, iji chọpụta uru ị ritere na paụnd na pence, a ga-achọ ka ị ree mkpụrụ ego gị n'ọma ahịa.
Agbanyeghị, ọ bụrụ na ahịa mkpuchi gafere oge ike ọgwụgwụ, ịnwere ike iwepu mkpụrụ ego gị na ego efu.
Nke a nwere ike ibute mfu, na-emezi igwe ojii igwe ojii itinye ego na-enweghị ọrụ. N'okwu ndị siri ike karị, ọ bụrụ na ọrụ nkewa dị iche iche daa kpamkpam, uru igwe ojii gị nwere ike ịbụ ihe na-abaghị uru.
Gbachiri ya na nkwekọrịta na-abaghị uru
Agbanyeghi na igwe ojii nwere ike inwe ihe ịga nke ọma na igwuputa otu cryptocurrency, ọ nweghị nkwa ọ ga-abụ mgbe niile.
Ọmụmaatụ, ọ bụrụ na nnukwu ọrụ ngwuputa ihe ewepụtara ngwaike ngwaike nke nwere ike iwepụta ike ọkụkụ karịa ihe ọ bụla ọzọ n'ahịa, ebe nrụọrụ igwe ojii nwere ike ọ gaghịzi enwe ike ịsọ mpi
Nke a ga - abụ nnukwu nsogbu ma ọ bụrụ na ị kpọchiri n'ime nkwekọrịta igwe ojii na - enweghị ike ịpụ.
Ebe kacha mma Cloud Mining saịtị 2021
Ọ bụ ezie na anyị ga-atụ aro ịme nyocha nke gị tupu ịbanye na saịtị igwe ojii ọhụụ, anyị edepụtarala ihe ndị anyị na-ahọrọ n'okpuru. N’ụzọ dị oke mkpa, gbaa mbọ hụ na ikpo okwu a ziri ezi maka mkpa onye ọ bụla, yana ị ghọtara ọghọm dị na ya.
Ọ bụrụ n’ị gụọ akwụkwọ ntuziaka anyị na igwe ojii Bitcoin na-egwupụta site na mbido ruo n’ọgwụgwụ, enwere olile anya na ị nwere nghọta doro anya etu oghere a si arụ ọrụ. Nke a kwesịrị ịgụnye ihe ndị ịchọrọ ịtụle n'ịhọrọ ebe a na-egwupụta igwe ojii, yana ịtụle nke cryptocurrency ga m.
Nke kachasị mkpa, ị makwaara ọtụtụ ihe egwu dị na itinye ego na ebe a na-egwupụta igwe ojii - dị ka ịgbachi n'ime nkwekọrịta na-agaghị aba uru ma ọ bụ na-arụ ọrụ n'ọma ahịa cryptocurrency.
Site na nke ahụ, igwe ojii igwe ojii na-enye ohere iji nweta uru pere mpe, agbanyeghị na-agbanwe agbanwe. Enweghị ihe ọ bụla a chọrọ iji zụta ngwaọrụ ngwaike ọ bụla dị oke ọnụ, ọ dịghịkwa mkpa ichegbu onwe gị banyere ọkụ eletrik. Kama nke ahụ, ị ​​ga - ekpebi ụdị mkpụrụ ego ịchọrọ iji mụọ, ego ole ị chọrọ itinye, ma ọ bụ ya.
Enwere igwe ojii na-egwupụta igwe ojii n'efu?
Ọ bụ ezie na ọtụtụ igwe ojii na-egwupụta nyiwe nwere ike ịsị na ha na-enye ọrụ ya na enweghị ego, o yighị ka ọ bụ ọrụ ziri ezi. A sị ka e kwuwe, gịnị kpatara ikpo okwu ga-eji nwee nsogbu itinye ego n'ọtụtụ ebe a na-egwupụta akụnụba zuru ezu, wee nye ya ọrụ igwe ojii ya n'efu?
Olee otu m ga-esi mara ma igwe ojii a na-egwupụta ihe na saịtị ndị kwere ekwe?
Mininggwé ojii na-egwupụta saịtị na-arụ ọrụ n'ụzọ a na-achịkwaghị achịkwa, yabụ ịkwesịrị ịkpachara anya na onye ị debanyere aha. Ihe kachasị mma i nwere ike ime bụ ịlele oge ole ikpo okwu na-arụ ọrụ, yana iji nyochaa nzaghachi na ngalaba ọha site n'aka ndị na-etinye ego n'oge gara aga na ndị dị ugbu a.
Ego ole ka igwe ojii na-akwụ?
N'otu aka, ịkwesighi ịzụta akụrụngwa ọ bụla, yabụ ị nwere ike itinye obere ego ma ọ bụ ihe masịrị gị. Agbanyeghị, ị ga-akwụ ụgwọ ego iji saịtị igwe ojii igwe ojii, nke ga-adị iche na ndị na - eweta ya na ndị na - eweta ya.
Ogologo oge ole ka nkwekọrịta igwe ojii na-egwupụta?
Okwu nkwekọrịta pere mpe nke igwe ojii na-enye ga-adị iche na saịtị. Ọ bụ ezie na ụfọdụ na-enye oge opekata mpe nke ọnwa 6, ndị ọzọ dị ogologo.
Enwere m ike ịhapụ nkwekọrịta igwe ojii m n'isi ụtụtụ?
Nke a dabere na usoro nke nkwekọrịta ahụ. Ebe kachasị mma igwe ojii na-egwupụta egwu ga-enye nkebi ahịrịokwu nkwụsị nke na-enye gị ohere ịpụ nkwekọrịta ma ọ bụrụ na ọ bụrụ na ọ na-anọgide na-abaghị uru maka ọnụọgụ ụfọdụ nke ụbọchị.
Kedu cryptocurrencies m nwere ike ichoputa m?
Ebe a na-egwupụta igwe ojii ga-akwado cryptocurrencies dabere na ngwaike ha nwere. Nke a bụ n'ihi na cryptocurrencies ga-enwekarị algorithm hahing, yabụ nyiwe kwesiri itinye ego na ngwaọrụ ndị pụrụ iche. Ka o sina dị, nhọrọ gụnyere Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Litecoin, na ndị ọzọ.
Kedu ka esi akwụ ụgwọ igwe ojii igwe ojii?
Igwe ojii igwe ojii na-ekesa uru kwa ụbọchị. Nke a na-abụkarị n'otu ego ị na-egwupụta igwe ojii. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ị na-egwupụta Ethereum, ị ga-enweta uru gị kwa ụbọchị na ETH.
Emelitere ikpeazụ: February 15th, 2021